HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Bassa (Cameroun) Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tamoul Tchouvache Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
“Tahaka ny nankatoavanareo mandrakariva, ... dia miezaha mafy foana amin-tahotra sy hovitra, mba hahazoanareo famonjena.”—FIL. 2:12.
HIRA: 133, 135
Nahoana ianao no tsy tokony hatahotra ny hatao batisa?
Inona no tokony hezahinao hatao raha te ho voavonjy ianao?
Nahoana no tena zava-dehibe aminao ny voady nataonao tamin’ianao nanokan-tena ho an’i Jehovah?
1. Nahoana no tena ilaina ny batisa? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
AN’ALINY isan-taona ny olona atao batisa. Tanora ny ankamaroan’izy ireny. Misy aza mbola kely mihitsy. Mety ho notezaina tao amin’ny fahamarinana izy ireny. Anisan’izy ireny ve ianao? Deraina ianao raha izany. Mila atao batisa mantsy ny Kristianina, ary tena ilaina izany mba hahazoana famonjena.—Mat. 28:19, 20; 1 Pet. 3:21.
2. Nahoana ianao no tsy tokony hatahotra hanokan-tena ho an’i Jehovah?
2 Marina fa mahazo fitahiana be dia be ny olona iray rehefa vita batisa. Mahazo andraikitra koa anefa izy. Raha efa natao batisa ianao, dia namaly hoe “eny” rehefa nametraka an’izao fanontaniana izao ilay rahalahy nanao ny lahatenin’ny batisa: “Miorina amin’ny soron’i Jesosy Kristy, moa ve ianao nibebaka noho ireo fahotanao ka nanokan-tena ho an’i Jehovah mba hanao ny sitrapony?” Natao batisa ianao mba hampisehoana fa efa nanokan-tena ho an’i Jehovah. Nampanantena azy ianao tamin’izay hoe ho tia azy ary ny sitrapony no ho zava-dehibe indrindra aminao. Tena zava-dehibe izany voady nataonao izany, ary tsy tokony hanenenanao. Tsy hanenina mihitsy ianao namela an’i Jehovah hitantana ny fiainanao. Eritrereto tsara fa raha tsy nahalala an’i Jehovah ianao, dia ho anisan’ny tontolon’i Satana. Tsy miraharaha an’izay famonjena anao i Satana. Faly aza izy raha tsy manohana an’i Jehovah ianao fa manohana azy, dia tsy ho afaka hiaina mandrakizay.
3. Inona no fitahiana azonao noho ianao nanokan-tena ho an’i Jehovah?
3 Eritrereto ny fitahiana azonao noho ianao tsy manohana an’i Satana, fa nanokan-tena ho an’i Jehovah sy natao batisa. Natokanao ho azy ny fiainanao, ka afaka milaza tsara mihitsy ianao hoe: “I Jehovah no momba ahy, ka tsy hatahotra aho. Inona moa no azon’ny olombelona atao amiko?” (Sal. 118:6) Momba anao i Jehovah sady mankasitraka anao. Tsy misy voninahitra lehibe noho izany!
4, 5. a) Nahoana isika no afaka milaza fa tompon’andraikitra amin’izay ataony ny olona efa nanokan-tena ho an’i Jehovah? b) Inona no tsy maintsy atrehin’ny Kristianina rehetra?
4 Manofa trano angamba ianareo, dia ny dadanao no mandoa ny hofany. Tsy hoatr’izany ny fifandraisanao amin’i Jehovah, raha efa vita batisa ianao. Na dia mbola miara-mipetraka amin’ny dada sy mamanao aza ianao, dia izay ataonao ihany no hahavoavonjy anao na tsia. Ianao no tompon’andraikitra amin’izany. Mila mitadidy an’izany ianao satria tsy fantatra izay havoaky ny ampitso. Tamin’ny mbola kely angamba ianao no vita batisa. Rehefa mihalehibe ianao, dia azo antoka fa hahatsapa fihetseham-po mbola tsy tsapanao mihitsy, ary hiatrika olana mbola tsy natrehinao. Hoy ny ankizivavy iray: “Tsy mampaninona ny ankizikely matetika ny hoe Vavolombelon’i Jehovah izy dia tsy mihinana gatô rehefa mankalaza aniversera ny any am-pianarana.” Hafa mihitsy anefa ny fakam-panahy mahazo azy rehefa mihalehibe izy. Hoy ihany ilay ankizivavy: “Lasa mafy kokoa ny faniriana hanao firaisana rehefa afaka taona vitsivitsy. Dia amin’izay indrindra izy no mila resy lahatra tsara hoe ny mankatò ny lalàn’i Jehovah foana no tsara indrindra.”
5 Tsy ny tanora ihany no miatrika olana mbola tsy natrehiny mihitsy. Miatrika fitsapana maro tsy ampoiziny ny Kristianina rehetra, na dia efa lehibe aza izy vao natao batisa. Mety ho olana ao an-tokantrano izany, na aretina, na olana momba ny asa. Hiatrika zava-tsarotra àry isika rehetra, na firy taona isika na firy taona, ka mila miezaka ny tsy hivadika amin’i Jehovah.—Jak. 1:12-14.
6. a) Inona no voady nataonao tamin’ianao nanokan-tena? b) Inona no lesona ianaranao ao amin’ny Filipianina 4:11-13?
6 Inona no hanampy anao tsy hivadika mihitsy? Aza hadino mihitsy fa nivoady tamin’ilay Mpanjakan’izao rehetra izao ianao hoe hanompo azy foana na inona na inona mitranga. Midika izany fa tsy hivadika aminy ianao, na tsy manompo azy intsony aza ny namanao na ny dada sy mamanao. (Sal. 27:10) Mangataha hery amin’i Jehovah mba ho vitanao ny hanefa an’izany voady izany, na inona na inona mitranga.—Vakio ny Filipianina 4:11-13.
7. Inona no dikan’ny hoe miezaka mafy “amin-tahotra sy hovitra” mba hahazo famonjena?
7 Tian’i Jehovah ho lasa namany ianao. Mila miezaka anefa ianao mba ho namany foana ka ho voavonjy. Hoy ny Filipianina 2:12: “Miezaha mafy foana amin-tahotra sy hovitra, mba hahazoanareo famonjena.” Midika izany fa mila eritreretinao tsara hoe ahoana no hataonao, mba hifandray tsara amin’i Jehovah foana ianao ary tsy hivadika mihitsy na inon-kidona na inon-kihatra. Tsy tokony hatoky tena be ianao. Na ny olona sasany nanompo an’i Jehovah efa ela be aza mantsy nivadika ihany. Inona àry no azonao atao mba ho voavonjy ianao?
TENA ILAINA NY MIANATRA NY BAIBOLY
8. Inona no tafiditra amin’ny hoe mianatra samirery, ary nahoana izany no zava-dehibe?
8 Mila mihaino an’i Jehovah sy miresaka aminy isika raha te ho namany. Mila mianatra samirery ny Baiboly isika, satria izay no fomba lehibe indrindra hihainoantsika azy. Tafiditra amin’izany ny hoe mamaky sy misaintsaina ny Teniny sy ireo boky aman-gazety avoakan’ny fandaminana. Tsy toy ny fianarana any an-tsekoly anefa ilay izy, ka hoe mila tadidinao fotsiny izay ianaranao mba ho afa-panadinana ianao. Toy ny ataon’ny mpizaha tany kosa no ataonao rehefa mianatra samirery. Mikaroka ianao dia lasa mahafantatra zava-baovao momba an’i Jehovah. Ho lasa namany ianao, ary hinamana aminao koa izy.—Jak. 4:8.
Mifampiresaka tsara amin’i Jehovah ve ianao? (Fehintsoratra 8-11)
9. Inona no hitanao hoe nanampy anao tamin’ny fianarana samirery?
9 Betsaka ny zavatra omen’ny fandaminan’i Jehovah mba hanampiana anao hianatra tsara. Eo, ohatra, ilay hoe “Kilalao Ara-baiboly” ao amin’ny fizarana hoe “Tanora”, ao amin’ny jw.org. Manampy anao handray lesona avy amin’ny zava-nitranga tantaraina ao amin’ny Baiboly izy io. Misy tari-dalana hianarana an’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? koa ao amin’ny jw.org. Manampy anao ho resy lahatra amin’ny zavatra ianaranao izy io, sady manampy anao hahay hanazava an’ilay izy. Misy soso-kevitra hafa koa ao amin’ny Mifohaza! Aprily 2009, ao amin’ilay hoe “Manontany ny Tanora Hoe... Inona no Hataoko mba ho Tiako ny Mamaky Baiboly?” Tena mila mianatra sy misaintsaina ianao raha te ho voavonjy.—Vakio ny Salamo 119:105.
TENA ILAINA NY MIVAVAKA
10. Nahoana ny Kristianina vita batisa no tena mila mivavaka?
10 Mihaino an’i Jehovah isika rehefa mianatra samirery, fa miresaka aminy kosa rehefa mivavaka. Tsy fombafomba tsy misy dikany ny vavaka. Tsy hoe mahatsara vintana koa izy io, ka hoe mivavaka isika amin’izay mba hahomby kokoa izay hataontsika. Resaka ifanaovana amin’ny Mpamorona ny vavaka. Tena te hihaino anao izy. (Vakio ny Filipianina 4:6.) Inona àry no azonao atao rehefa misy mampitebiteby anao? Hoy ny Salamo 55:22: “Apetraho amin’i Jehovah izay manavesatra anao.” Mino ve ianao fa tena mandaitra izany? Rahalahy sy anabavy an-tapitrisany no afaka manamarina fa tena nanampy azy ireo io torohevitra io. Afaka manampy anao koa ny vavaka.
11. Nahoana ianao no tokony hisaotra an’i Jehovah foana?
11 Tsy hoe rehefa hangataka fanampiana amin’i Jehovah ihany anefa isika vao hivavaka. Hoy mantsy ny Baiboly: “Asehoy fa mahay mankasitraka ianareo.” (Kol. 3:15) Mety hiady saina be amin’ny olana mahazo antsika isika, ka tsy hitantsika ny fitahiana be dia be efa azontsika. Nahoana àry raha atao tanjona isan’andro ny mieritreritra zavatra telo, fara fahakeliny, azonao isaorana an’i Jehovah? Mivavaha avy eo dia isaory i Jehovah noho ireny. Tamin’izy 12 taona i Abigail no natao batisa. Hoy izy: “Tsapako hoe i Jehovah no mendrika isaorana indrindra eo amin’izao rehetra izao. Isaky ny afaka misaotra azy noho izay nomeny antsika isika, dia tokony hanao an’izany. Nisy nampahatsiahy ahy indray mandeha hoe: Ahoana raha izay zavatra nisaorantsika an’i Jehovah androany ihany sisa no ananantsika rahampitso? Dia raha tsy nisaotra azy mihitsy izany isika, dia ahoana?” *
IANAO MIHITSY NO MILA MAHITA FA TSARA I JEHOVAH
12, 13. Nahoana no ianao mihitsy no mila mahatsapa hoe tsara i Jehovah?
12 Nanampy an’i Davida Mpanjaka hiatrika zava-tsarotra maro i Jehovah, ka nihira toy izao izy: “Andramo ka jereo fa tsara i Jehovah. Sambatra ny olona mialoka aminy.” (Sal. 34:8) Hita amin’izany fa ianao mihitsy no mila mahatsapa hoe tena tsara i Jehovah. Maheno tantaran’olona nampian’i Jehovah mba tsy hivadika ianao, rehefa any am-pivoriana. Mahita tantaran’olona hoatr’izany koa ianao rehefa mamaky ny Baiboly sy ny boky aman-gazety avoakan’ny fandaminana. Rehefa lasa mifandray kokoa amin’i Jehovah anefa ianao, dia ianao mihitsy no mila mahatsapa hoe tena manampy anao izy. Efa hitanao teo amin’ny fiainanao ve fa tsara i Jehovah?
13 Nisy zavatra miavaka nataon’i Jehovah ary ahitana fa tena tsara izy. Samy efa nahatsapa an’izany ny Kristianina rehetra. Inona izany? Nanasa antsika hifandray akaiky aminy sy ny Zanany izy. Hoy i Jesosy: “Tsy misy mahay manatona ahy raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka ahy.” (Jaona 6:44) Tsapanao ve hoe anisan’izany ianao? Sa ianao mieritreritra hoe: ‘Dadanay sy mamanay no notaomin’i Jehovah, fa izaho nanaraka an-dry zareo fotsiny!’ Raha efa nanokan-tena ho an’i Jehovah sy natao batisa anefa ianao, dia midika izany hoe hafa mihitsy ny fifandraisanao aminy. Fantany ianao satria hoy ny Baiboly: “Raha misy tia an’Andriamanitra ..., dia fantatr’Andriamanitra izy.” (1 Kor. 8:3) Nekeny ho anisan’ny fandaminany ianao, ka hevero ho sarobidy foana izany.
14, 15. Nahoana ny fanompoana no manampy anao hifandray kokoa amin’i Jehovah?
14 Rehefa manompo koa ianao no tena mahita hoe tsara i Jehovah. Manampy anao hiresaka ny zavatra inoanao amin’ny hafa mantsy izy rehefa eny am-pitoriana na rehefa any am-pianarana. Sarotra amin’ny ankizy sasany ny mitory amin’ny mpiara-mianatra aminy. Tsy mahagaga anao angamba izany. Tsy fantatrao mihitsy raha hihaino anao ry zareo na tsia. Mety ho sarotra kokoa ny mitory amin’ny ankizy maromaro noho ny mitory amin’ny ankizy tsirairay. Inona àry no azonao atao?
15 Eritrereto hoe nahoana ianao no mino ny zavatra inoanao. Jereo raha misy amin’ny fiteninao ny tari-dalana fianarana ny boky Ampianarina, ao amin’ny jw.org, dia ampiasao. Afaka manampy anao izy ireny mba hisaintsaina ny zavatra inoanao sy ny antony inoanao an’ilay izy ary ny fomba hanazavana azy amin’ny olona. Hazoto hiresaka momba an’i Jehovah ianao, raha tena resy lahatra amin’ilay zavatra inoanao sady niomana tsara hiresaka an’ilay izy.—Jer. 20:8, 9.
16. Inona no hanampy anao ho sahy hiresaka momba an’izay inoanao?
16 Na dia nanomana aza anefa ianao, dia mety mbola tsy ho sahy hanazava ny zavatra inoanao. Natao batisa tamin’izy 13 taona ny anabavy iray, izay 18 taona izao. Hoy izy: “Fantatro tsara hoe inona no inoako, fa tsy haiko indraindray ny fomba hiresahana azy.” Ahoana àry no ataony? Hoy izy: “Ataoko hoatran’ny resaka tsotra fotsiny ilay izy. Tsy misalasala ny mpiara-mianatra amiko miresaka ny zavatra nataony, dia izay koa no ezahiko atao. Miteny fotsiny aho hoe: ‘Nampianatra Baiboly aho indray mandeha, dia...’ Dia lazaiko amin-dry zareo avy eo izay tiako hotantaraina aminy. Tsy tonga dia Baiboly no resahiko, nefa matetika ry zareo no lasa te hahalala hoe ahoana no ataoko rehefa mampianatra Baiboly aho. Mametraka fanontaniana koa ry zareo indraindray. Hoatr’izany foana no fanaoko, dia lasa mora kokoa ny miresaka amin-dry zareo momba an’izay inoako. Faly be foana aho avy eo!”
17. Inona koa no azonao atao mba hahatonga anao ho sahy hiresaka an’izay inoanao?
17 Azo inoana hoe ho tsara fanahy aminao sy hanaja anao ny olona, raha manao hoatr’izany aminy ianao. Mbola kely i Olivia dia natao batisa, ary 17 taona izy izao. Hoy izy: “Natahotra foana aho taloha hoe raha miresaka Baiboly amin’ny olona aho, dia holazain-dry zareo fa mafana fo loatra amin’ny fivavahana.” Tsy nifantoka tamin’izay nampahatahotra azy intsony anefa izy tatỳ aoriana, fa nieritreritra hoe: “Be dia be ny tanora tsy mahalala ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy. Isika ihany no mba fantany. Dia arakaraka ny fitondran-tenantsika no mety hahatonga azy handray tsara ny fitoriana na tsia. Ahoana anefa raha menatra isika na sahirana na mangovitra, rehefa miresaka momba an’izay inoantsika? Mety hieritreritra ny olona hoe tsy mahafaly antsika akory ilay hoe manompo an’i Jehovah. Mety ho ratsy toetra amintsika mihitsy aza ry zareo, raha tsy matoky tena isika. Azo antenaina kokoa anefa hoe hanaja antsika izy ireo, raha tsy matahotahotra isika miresaka an’izay inoantsika, fa ataontsika hoatran’ny resaka fanaontsika andavanandro ihany ilay izy.”
MIEZAHA MAFY FOANA MBA HAHAZO FAMONJENA
18. Inona avy no ilaina mba hahazoana famonjena?
18 Hitantsika teo fa andraikitra lehibe ny hoe miezaka hahazo famonjena. Raha te ho voavonjy ianao, dia mila mamaky sy misaintsaina ny Tenin’Andriamanitra, mivavaka amin’i Jehovah, ary mieritreritra hoe inona no fitahiana efa omeny anao. Raha manao tsara an’ireo ianao, dia vao mainka hatoky hoe tena namanao i Jehovah. Hazoto hiresaka momba an’izay inoanao ianao amin’izay.—Vakio ny Salamo 73:28.
19. Nahoana no tsy ho very maina ny ezaka ataonao mba hahazoana famonjena?
19 Hoy i Jesosy: “Raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handa ny tenany ka hitondra ny hazo fijaliany ary hanaraka ahy mandrakariva.” (Mat. 16:24) Midika izany fa tsy maintsy manokan-tena ho an’Andriamanitra sy atao batisa ny Kristianina. Dieny izao dia mahazo fitahiana be dia be izay manao an’izany, ary afaka manantena hoe hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao. Miezaha mafy foana àry mba hahazoanao famonjena!
^ feh. 11 Misy soso-kevitra hafa ao amin’ny jw.org, ao amin’ilay hoe “Manontany ny Tanora: Nahoana Aho no Tokony Hivavaka?” sy ilay fampiasana miaraka aminy.